Shariif Xasan oo mar kale loo doortay afhayeenka baarlamaanka federaalka ah, helayna 217 cod ee 388-ka mudane ee codeeyey. – Radio Daljir
Shariif Xasan oo mar kale loo doortay afhayeenka baarlamaanka federaalka ah, helayna 217 cod ee 388-ka mudane ee codeeyey.
Maajo 29, 2010 12:00 b 0
Muqdisho, May 28 – Shariif Xasan Sh. Adam, oo hore u ahaan jiray afhayeenka baarlamaanka federaalka ah, ayaa maanta mar kale loo doortay afhayeenka golaha wakiilada.
Guddoonka ku meel gaarka ah ee golaha ayaa iclaamiyey sida codadka loo kala helay, sheegayna in Shariif Xasan uu helay 217 cod ee 388-ka mudane ee fadhiyey fadhigii golaha ee maanta.
Shariif Xasan oo la hadlay mudanyaasha golaha doorashada kadib ayaa uga mahad celiyey kalsoonida ay siiyeen, kana codsaday in ay la shaqeeyaan.
Shariif Xasan ayaa hore u ahaa afhayeenka baarlamaanka federaalka ah ee lagu doortay Oktoobar, 2004 magaalada Nairobi.
Sidoo kale waxaa uu ahaa wasiirka maaliyada ee xukuumada R/wasaare Sharma’arke oo uu maalmo ka hor iska casilay.
Khudbadda musharaxa xilka guddoomiyaha baarlamaanka federaalka KMG ah ee Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sh. Aadan.
Mudnayaal iyo marwooyin, xildhibaanadda sharafta leh, warbaahinta iyo marti sharafta, waxaa sharaf weyn ii ah in aan halkaan idiinkugu soo gudbiyo erayadii aan ugu talo galay in aan ka soo jeediyo madashaan loogu tartamayo xilka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliyeed, anigoo xasuusan in xildhibaadda sharafta badan ee maanta aan codkooda weydiisanayo ay ka kooban yihiin laba qaybood oo mid ka mid ahi hore codkooda ii siiyeen 15-kii September 2004-tii iyo qaybta kale oo iyagana aan isla ahayn ARS si fiicana u soo wada shaqaynay, taas micnaheedu waa in aad dhamaantiin aqoon fiican ii leedihiin.
Mudanayaal iyo Marwooyin, waad ogtihiin xaaladda maanta dalku ku jiro, haddii aan baarlamaanka Soomaaliya nahay waxaa nalooga baahan yahay aragti dheer oo gaarsiisa dadka iyo dalka Soomaaliyeed nabadgelyo, horumar iyo dib u dhis, iyo in loo adeego dadka Soomaalliyeed ee ku dhibaataysan dalka gudihiisa iyo dibadiisa, Baarlamaanka Soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay in uu hormuud u noqdo sidii shacabka Soomaaaliyeed uga bixi lahaa xaaladda adag ee maanta lagu jiro.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxaad ogtihiin in dowladda federaalka KMG ahi tahay dowlad baarlamaani ah oo haddii baarlamaanku si fiican u shaqeyn waayo aanay dowladdu wax guul ah gaari karin, sidaas awgeed, waxaan ku dadaalayaa in baarlamaanku u shaqeeyo si firfircoon soona saaro go?aano waxtar leh.
Mudanayaal iyo Marwooyin, haddii aad ii doorataan guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliyeed, waxaan balanqaadayaa:
– In aan baarlamaanka ku hogaamiyo sida ay qabaan shuruucda dalku sida axdiga KMG ah iyo xeer hoosaadka baarlamaanku, isla markaana go?aamiyo wixii hadba majooratiga baarlamaanku isku raaco.
– In aan la imaado isbedel ku dhisan waayo aragnimo iyo daacadnimo.
– In aan ku dedaalo in madaxda iyo hay?addaha kala duwan u midoobaan danta guud ee qaranka sida difaaca dalka, dib u heshiisiinta iyo adeega bulshada Soomaaliyeed ee dhibaateysan, lagana dheeraado wax kasta oo khilaaf keeni kara.
– in aan ku dadaalo in aan mideeyo xubnaha baarlamaanka Soomaaliyeed, kuna dhaqo maamul wanaagsan oo ku dhisan cadaalad.
– in aan ku dadaalo sidii hay?addaha kala duwan ee dowladda mid waliba u gudan lahayd waajibaadkeeda qaran.
– ugu danbeyntii, waxaan balanqaadayaa haddii aad i doorataan in aan dedaal badan ku bixiyo sidii dalka nabad iyo xasilooni loogu soo celin lahaa.
Haddaba, Mudanayaal iyo Marwooyin waxaan si xushmad iyo qadarin ku dheehan tahay idiinka codsanayaa in aad codkiina i siisaan.
Maanta oo aad i doorato waxay ka dhigan tahay in aad is siisay fursad qaali ah oo aan ugu adeego xildhibaanada baarlamaanka, dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ee dhibaateysan.
Qabqableyaal ayaa Somaliland Adeegsaday – WQ. Liban Ahmed
Qaar dadkii ku dhaawacmay dagaalkii Buuhoodle oo la keenay cisbitaalka guud ee Galkacyo & kuwa kale oo weli wadada ku soo jira.